Sadaasaa 03, 2017
Uummatoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti, walitti-hidhata, tokkummaa fi obbolummaa baroota hedduu lakkoota hedduu lakkoobsise cimsuuf – jechuudhaan, gurmuuun prezidaantii Oromiyaa, abboota gadaa, maanguddoota biyyaa fi namoota bebbeekamoo of keessaa qabu tokko har’a magaalaa bulchiinsa naannoo Amaaraa – Baahir Daar galee jira. Bulchiinsota lameen irraa namoonni dhibba tokkoo fi shantamaa ol kan itti hirmaatan – koonferesiin dhimma kanatti fuuleffate boor achumatti akka geggeessamuuf jirus beekamee jira. Mariin jalqabaa kun kan uummatoota Orommoo fi Amaara gidduutti geggeessamuun jalqabe ta’e iyyuu, gara fuul-duraatti uummatoota Itiyoophiyaa biyyattii keessaa mara waliin obbulummaa fi tokkummaa jabeessuu irratti kan itti fufee geggessamu ta’uu – itti-gaafatamaan biiroo dhimmoota koomiyunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Addisuu Araggaa hubachisanii jiran.
Gama bulchiinsa naannoo Amaaraa tiis, Itti-gaafatamaan dhimmoota Koomiyunikeeshinii Mootummaa – Obbo Nigusuu Xilaahun, Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Amaaraaf ibsa kennaniin, “Uummatni akka uummataatti, Amaarri akka Amaaraatti akka saba-lammiitti, Oromoon akka Oromootti akka sab-lammiitti yeroon itti walitti-bu’an hin jiru. Garuu, walitti-bu’insoonni naannoolee adda addaatti ka’an garuu, bifti isaanii kam iyyuu haa tahu, sababaan isaani kam iyyuu haa tahu, bifa walitti-bu’insa sab-lammoota gidduu qabsiisuuf sochiileen godhaman ni jiru. Kanaaf, gara walitti-bu’insa sabootaatti jijjiiramu. Yeroo jijjiramanis arginee jirra.” jedhan.
Uummatni Amaaraa miliyoonaan lakkaawamu Oromiyaa keessa jiraata. Magaalee Ormiyaa tokko tokko keessa, uummatni Amaaraa dhibba irraa harka 20, 30, 40 tahu, uummata Oromoo wajjiin firoomee, wal irraa horree waliin jiraata. Baadiyaa keessa illee ni jiraata. Uummatoonni kun hamma nuti yaadnu caalaa tokko waan ta’aniif, seenaa keessatti eenyu illee adda isaan baasuu hin danda’u illee jedhanii jiran – Obbo Nigusuu Xilaahun.
Aangawoonni Oromiyaa,Koonfiransi Hidhata Uummatoota Oromoo fi Amaaraa Cimsuutti Fuuleffate – Jedhanitti Hirmaachuuf Baahir-daaritti Argaman
Xiinxala Hayyuu Seeraa : Dhimma Obbo Baqqalaa Irratti Abbaa Alangaa fi Mana Hidhaa Qiliinxoo Gidduu Wal Hubannaan Jira